Clinique de Skin အရေပြားနှင့်အလှအပဆေးခန်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Clinique de Skin အရေပြားနှင့်အလှအပဆေးခန်း
Clinique de Skin အရေပြားနှင့် လေဆာဆေးခန်းသည် အရေပြားနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် လူအများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို အချိန်တိုအတွင်း အခိုင်အမာရရှိထားသော ဆေးခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2014 ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Clinique de Skin ဆေးခန်း (1)ကို အမှတ် 17/18 ၊ ကန်လမ်း (Moon Bakery အနောက်ဘက်)၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး Clinique de Skin ဆေးခန်း (2) ကို အမှတ် 542 ၊ ကမ်းနားလမ်း (11 လမ်းထောင့်) ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
အစဉ်ထာဝရ နုပျိုခြင်းကို လူတိုင်းနီးပါးလိုလားကြပါသည်။ မိမိ၏ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ကျေနပ်မှုရှိခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုများတိုးပွားစေပြီး လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမှုဘ၀ နယ်ပယ်တွင်ပါ ကောင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရရှိလာစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွမ်းကျင် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များထံမှ အရေပြားနှင့်ပတ်သက်၍ ပြီးပြည့်စုံသော အကြံဉာဏ်ကောင်းများကို ရယူနိုင်ရန်အတွက် Clinique de Skin ဆေးခန်းကို မနက် 10:00 နာရီမှ ညနေ 8:00 နာရီထိ နေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသော ပတ်ဝန်းကျင်၊ ခေတ်မီ နည်းပညာနှင့် ဆေးဝါးများ၊ နောက်ဆုံးပေါ် ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် စက်ကိရိယာပစ္စည်းသစ်များနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အရေပြားနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သော အရေပြားနှင့်အလှအပ ပါရဂူဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
Clinique de Skin အရေပြားနှင့် လေဆာဆေးခန်း၏ ၀န်ဆောင်မှုများမှာ -
1. မခွဲစိတ်ဘဲ မျက်နှာပြုပြင်ခြင်း
(1) Filler ဖြင့် မျက်နှာပြုပြင်ခြင်း
(2) Botox ဖြင့် မျက်နှာပြုပြင်ခြင်း
(3) Ultra V Lift ဖြင့် မျက်နှာပြုပြင်ခြင်း
(4) Therma Facelift ဖြင့် မျက်နှာပြုပြင်ခြင်း
(5) Lipodissolve ဖြင့် မျက်နှာပြုပြင်ခြင်း
2. ၀က်ခြံနှင့် ၀က်ခြံအမာရွတ်များ ကုသပေးခြင်း
3. တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်နှင့် နေလောင်ကွက်များကို ကုသပေးခြင်း
4. မလိုလားအပ်သော အမွှေးအမျှင်များဖယ်ရှားပေးခြင်း ( ချိုင်းမွှေး၊ ခြေသလုံးမွှေး စသည်)
5. မိမိသွေးရည်ကြည်ဖြင့် နုပျိုလှပအောင်ကုသပေးခြင်း
6. ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့် အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
9. အကြောပြတ်ရာများကို ကုသပေးခြင်း
10. အရောင်စုံတက်တူးများကို နောက်ဆုံးပေါ်လေဆာစက်ဖြင့် ဖယ်ရှားပေးခြင်း
11. အသားအရေအစဉ်အမြဲ ကောင်းမွန်စေရန် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း
12. ဦးရေပြားနှင့် ဆံကေသာ အလှအပအတွက် ကုသပေးခြင်း
14. အရေပြား ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကုသပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။